Maxkamadda Racfaanka Gobolka Banaadir oo ka digtay in Baraha Bulshada la dhex keeno Dacwad Maxkamadeed – Kalfadhi
Maxkamadda Racfaanka Gobolka Banaadir ayaa si adag uga digtay in Baraha Bulshada ku xiriirto la dhex keeno dacwad ka socota Maxkamadda. Maxkamaddu waxay sheegay in Gal-dacwadeed Maxkamadda ka furan aan looga caban karin Baraha Bulshada. Guddoomiyaha Maxkamaddaas, Garyaqaan Abshir Cumar Cabdullaahi, ayaa sheegay in dadka dacwadahoodu ka furan yihiin Maxkamadda, haddii ay ka cabtaan Baraha Bulshada, dib loo dhigi doono dacwadda u furan, oo iyaga dacwad ciqaabeed lagu soo oogi doono.
“Maanta wixii ka dambeeya waxay noqon doontaa ciddii ka dacwoota, oo Baraha Bulshada soo dhigto kiis ka socda maxkamadda, in kiiskiisina caddaalad laga gaari doono, balse ay ka hor mari doonto in kiis ciqaaba isaga lagu soo oogo” ayuu yiri Guddoomiyaha Maxkamadda Racfaanka Gobolka Banaadir, Abshir Cumar Cabdullaahi. Waxa uu sheegay in ay Hay’adaha Baarista weydiin doonaan qofka lagu helo arrinta uu ka digayo sababta iyo ujeedada uu ka lahaa waxa uu ku faafiyey Baraha Bulshada.
Sida uu baahiyey TV-ga Qaranka, waxa uu Garyaqaan Abshir Cumar Cabdullaahi, si gaar ah uga digayaa in la sumcad dileeyo garsoorka iyo maxkamadaha dalka, gaar ahaan Maxkamadda Sare iyo tan Gobolka Banaadir oo isku meel ku yaala, waxaana hadalkiisa uu ku soo beegmayaa iyada oo ay dad badani aaminsan yihiin inuusan Soomaaliya ka jirin garsoor caadil ah.
Kiinya oo u yeeratay Safiirkeeda Soomaaliya si ay uga jawaabto Xirmooyinkii Shidaalka Soomaaliya ee lagu soo bandhigay UK